Caqli: Sidee loo xallin karaa Caqabadaha Macluumaadka Webka?
Waxay noqotey wax caadi ah shirkadaha inay helaan xogta codsiyada ganacsiga. Shirkadaha hadda waxay raadinayaan farsamooyin dhakhso ah, ka fiican, oo farsamaysan si ay u soo saaraan xogta si joogto ah. Nasiib darro, is-daba-galida webka waa farsamo farsamo, waxayna u baahan tahay wakhti qurux badan si loo barto. Dabeecadda firfircoon ee webka waa sababta ugu weyn ee dhibaatada. Sidoo kale, tiro aad u tiro badan oo ah bogagga internetka ayaa ah bogag internetka ah, waana ay adagtahay in la xoqo.
Caqabadaha shabakadda Calaamadaha
Caqabadaha ku jira fiirinta shabakadda waxay ka soocday xaqiiqda ah in website kastaa uu yahay mid u gaar ah, sababtoo ah waxaa si gooni ah loogu qoondeeyey dhammaan bogagga kale. Sidaa daraadeed, waa wax aan suurtagal ahayn in la qoro hal xog ah oo barnaamij ah oo ka soo saari kara xogta laga helo bogag badan. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay koox ka mid ah barnaamijyada khibrad leh si aad u qorto codsigaaga webka dalbashada meel kasta oo la bartilmaameedsanayo. Codsashada codsigaaga boggaga oo dhan maaha oo kaliya daal, laakiin sidoo kale waa qaali, gaar ahaan ururada u baahan in la soo saaro xogta boqolaal goobood si joogto ah. Sida ay tahay, xoqista webka horeba waa hawl adag. Dhibaatada ayaa sii daraysa haddii goobta bartilmaameedku tahay mid firfircoon.
Qaar ka mid ah hababka loo isticmaalo in lagu soo koobo dhibaatooyinka soo saaridda xogta laga helo bogagga internetka ayaa lagu sharraxay hoosta hoose.
1. Nidaamka Isku-duwaha
Jawaabta shabakadaha qaarkood waxay ku xiran tahay goobta juqraafiyeed, nidaamka hawlgalka, barta shabakadda, iyo qalabka loo isticmaalo si loo helo. Si kale haddii loo dhigo, bogagga internetka, macluumaadka la heli karo ee booqdayaasha ku saleysan Asia waxay ka duwanaan doonaan waxyaabaha laga heli karo dadka booqanaya Maraykanka. Noocani noocan oo kale ah ma aha oo kaliya khalkhalka websadaha, laakiin sidoo kale waxay ku adkaataa in yar oo ay u adag tahay sababtoo ah waxay u baahan yihiin in ay qeexaan nooca saxda ah ee gurguurashada, iyo waxbarashadan badanaaba ma ahan xeerarkooda.
Kala soocida arrintu sida caadiga ah waxay u baahan tahay shaqo gacan qabasho ah si loo ogaado inta jeer ee website-yada gaarka ah ay leedahay iyo sidoo kale in la isku habeeyo wakiillada xogta laga soo qaato nuqul gaar ah. Intaa waxa u dheer, goobaha ay yihiin goobo gaar ah, waraaqahaaga xogta waa in la geeyaa server oo ku saleysan isla goobta oo leh bogga shabakadda bartilmaameedka
2. Gawaarida Browser
Tani waxay ku habboontahay bogagga internetka leh nidaamyo firfircoon oo adag. Waxaa loo sameeyaa iyada oo la samaynayo dhamaan bogga oo la adeegsanayo browser. Farsamadani waxaa loo yaqaanaa farsameynta shabakadda. Selenium waxaa loo isticmaali karaa nidaamkan sababtoo ah waxay leedahay awooda lagu wado gawaarida laga bilaabo luqad kasta.
Marka content la sameeyo, waxaa la badbaadiyaa degaanka, iyo qodobbada xogta la soo saaray ayaa dib loo soo saaraa. Dhibaatada kaliya ee leh habkan waa in ay u nugul yihiin qaladaad badan.
3. Gacan-siinta Codsiyada Dukumiintiga
Website-yada qaarkood waxay dhab ahaantii u baahan yihiin talooyin dadka isticmaala ka hor inta aysan soo bandhigin xogta loo baahan yahay. Tusaale ahaan, haddii aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan makhaayadaha meel gaar ah, jaantusyada qaar waxay codsan karaan lambarka sirta ah ee meesha looga baahan yahay ka hor intaadan helin liiska loo baahan yahay ee maqaayadaha. Tani inta badan way ku adag tahay tariiqda sababtoo ah waxay u baahan tahay talooyinka isticmaalaha. Si kastaba ha noqotee, si aad u daryeesho dhibaatada, codsiyada boostada waxaa loo diyaarin karaa iyada oo la adeegsanayo xuduudaha ku haboon ee qalabka xoqista si aad u hesho bogga.
4. Waxsoosaarka JSON URL
Qaar ka mid ah bogagga websaydka waxay u baahan yihiin wicitaanada AJAX si ay u buuxiyaan oo u cusbooneysiiyaan content. Bogagahaan waa ay adagtahay in la xoqo maxaa yeelay kiciyeyaasha file-ka JSON si fudud looma heli karo. Sidaas awgeed waxay u baahan tahay baaritaanka gacanta iyo kormeerida si loo ogaado xuduudaha ku habboon. Xalka ayaa ah soo saarista URL-ka loo baahan yahay ee JSON ee leh xuduudaha habboon.
Gebogabada, bogagga boggan ee firfircoon ayaa aad u adag in la xoqo si ay u baahan yihiin heer sare oo khibrad, waayo-aragnimo, iyo kaabayaal casri ah. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah shirkadaha shabakada woqooyiga ah ayaa kashaqayn kara sidaa darteed waxaad u baahan kartaa inaad kireysato shirkadda saddexaad ee xogta xisaabaadka Source .